Francisco Narla. 10 mibvunzo yemunyori weLain the bastard. | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo wemunyori: francisconarla.com
Francisco Narla Ndiye mumwe wevanonyanya kutaura nyaya dzezvinyorwa zvekare uye ane nyowani nyowani. Lain the bastard rakaburitswa munaKurume uye ndiye anokunda iyo mubairo wekutanga muEdhasa Historical Narrative. Ingova munguva yakapfuura Mutsvene Jordi uye ichiri munzira yekusimudzira. Mira inotevera ichave Madrid Bhuku Rakanaka ichatanga kupera kwemwedzi uno uye uko munyori achasaina makopi atovepo 9 na10 Chikumi.
Haisi nguva yekutanga iyo Narla taura nesu. Zvino wave nemutsa zvakakwana kuti undipindure idzi Mibvunzo gumi pamusoro pekuverenga kwako, vanyori vako, ako mapurojekiti matsva, zvinokurudzirwa nemunyori wako uye nemaonero ako pachiitiko chekutsikisa. Saka zvekare Ndinokutendai zvikuru kubva pano kwenguva yako uye ndinotarisira kukukwazisai kune iyo Feria de Madrid.
1 1. Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
2 2. Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
3 3. Ndiani munyori waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
4 4. Ndeupi munhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
5 5. Chero zvivaraidzo kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
6 6. Uye nzvimbo yako yaunofarira uye nguva yekuzviita?
7 7. Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
8 8.Mhando dzako dzaunofarira?
9 9. Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
10 10. Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa ndechevanyori vakawanda sei varipo kana kuti vanoda kutsikisa?
1. Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
Chokwadi ndechekuti aiwa, kunyangwe ndichifunga kuti raizove bhuku rema comic, pandakanga ndiri mudiki ndaida ma comics e Mortadelo uye Filemon, Ndichine muunganidzwa wakakura. Uye chokwadi ndechekuti nguva nenguva ini ndinoverengazve mamwe acho uye ini ndinoramba ndichifarira zvavo zvekupenga.
Kunyangwe ini ndichifungidzira kuti mubvunzo unoreva yenyaya yekutanga yandaverenga uye haina kujeka kwandiri futi. Ini nenzira isina kujeka ndinorangarira mamwe mabhuku evana, kunyange ini ndichirangarira zvakajeka nyaya dze Sandokan iyo iyo ambuya vababa vangu yavakandipa, kubva kune mumwe waJules Verne, sa Michael Strogoff, zvakare kubva pane akateedzana e vaongorori vatatu de Hitchcock, iya yaJames Bond ... Uye, zveshuwa, eano adventure enhau e Alberto Vazquez-Figueroa. Ndakaverenga zvakawanda.
Kana iri nyaya yekutanga yandakanyora, ini handicharangarira kana, chokwadi ndechekuti, ndakazviita kubvira ndichiri mudiki uye ndaisakwanisa kunyatso tsanangura. Izvo zvinogona kungowedzerwa kuti ndizvo chimwe chinhu chakanangana neangu zvekuti handikwanise kuyeuka pasina chinhu chakamirira kuisa pabepa. Ndakatanga kare kare, makore gumi asati apfuura kugara uchitakura neni kabhuku kekunyorera.
2. Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
Ini handizvirangaririwo. Mabhuku agara ari shamwari dzangu dzepedyo uye handigone kutaura kuti ndeipi yekutanga yaive chaiyo. Ini ndinogona kutaura kuti mhando yemafaro iyo yandaitaura nezvayo mumubvunzo wapfuura yakandimaka zvakanyanya. Akagadzira iyo shuwa kufamba, kuziva nzvimbo dzinoshamisira, kurarama zvisingaite zviitiko, semagamba emazano ehudiki aya.
3. Ndiani munyori waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
Ini handimbozive kupindura iyi mhando yemibvunzo, Ndine nguva yakaoma kusarudza pane imwe kunyanya, kune akawanda. Zvakare, kwandiri, zvandinoda zvachinja pamusoro pemakore. Ini ndinofungidzira kuti, sevamwe vaverengi vazhinji, pakave paine echinyakare zvandisina kukwanisa kukoshesa kusvikira ndakura.
Asi hei, ndichaedza kupa yakawanda kana shoma chronological runyorwa nemamwe acho. Ehezve, vashoma vacharamba vari mupombi.
Homero, Julio César, munun'una Egeria, Ramón Lull, Erasmo de Róterdam, Quevedo, Rosalía de Castro, Unamuno uye kwenguva dzazvino ndichawedzera vashoma vevaya vasisipo nesu, sekune avo vachiri kunyora tichavaisa padivi, kuti vasazopinda muminda ine madhaka. Ngatione, Delibes hapana mubvunzo chirevo, Blasco Ibezen, Sender...
Chokwadi chiripo kune zvakawanda uye hazvigone kutaurwa kuti ndiri ngano.
4. Ndeupi munhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
Handifunge kuti ndingadai ndaifarira kusangana nemumwe wavo, dai zvaibvira, zvaizobvisa mashiripiti akawanda, zvaizokanganisa hukama. Asi ini ndichabiridzira kupindura, ndingadai ndaifarira kusangana Antoine de Saint-Exupery, iyo isina kungonyora iyo inoshamisa chete Muchinda mudikiPane kudaro, akazviita iye mutambi mukutamba kwake.
Kana chiri chimiro icho chandingadai ndaifarira kugadzira, chokwadi ndechekuti Handina zano, asi ini handifunge kuti inzira yakanaka yekuisvika, chero munhu ane mukurumbira anoshanda sebinomial nemunyori wayo, dai akange akanyorwa nevamwe, vangadai vasina kusvika pakubudirira kana kukosha kweiyo yekutanga.
5. Chero zvivaraidzo kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
Kana zvakadaro nyora: hapana kwete zvachose, ndinochinjika zviri nyore kune chero mamiriro uye chokwadi ndechekuti ini ndinongonetsekana nekuita nepandinogona napo. Ini ndinogara ndichiedza kugadzirisa, kuti rovhero yega yega inhanho kumberi.
Kana zviri zvekuverenga: chero. Ini ndinongoedza verenga zvakanyanya sezvinobvira, kunyangwe izvo zvisingandifadze. Ini ndinongowedzera kuti munyori anofanirwa kuzvimanikidza kuverenga kubva kune imwe nzira pane iye muverengi ari kutsvaga kuzadza zororo rake. Munyori, mumaonero angu, anofanirwa kuyedza kuverenga nekuongorora zvinyorwa, kuti adzidze pazviri.
6. Uye nzvimbo yako yaunofarira uye nguva yekuzviita?
Kwete kunyanya, kunyange ini ndichinyatsoda verenga panze, Ndinogara kumaruwa uye ndinonakidzwa nekuverenga musango.
Ini ndinogona zvakare kuwedzera kuti, kunyangwe hazvo ivo vari kutanga kuwana simba izvozvi muSpain, ini ndiri kwazvo kufarira audiobooks Kwemakore, kubvira izvi zvisati zvaitika. Ndanga ndichishandisa audiobooks pakufamba kwemotokari kwemakore mazhinji (ndinoita mamaira mashoma pagore).
7. Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
zhinji, zvizhinji. Uye kwete iwo chete andinoda, asiwo iwo andisingade. Muzviitiko zvese zvinoshanda kudzidza. Ivo vanodzidziswa kubva kune wese munhu, kunyangwe kubva kumanyoro asina kunyorwa eakatanga nguva. Iwe unofanirwa kuva nemwero, dzikisa musoro wako uye zviite kuti udzidziswe nezvaunoverenga.
8.Mhando dzako dzaunofarira?
Ndakaverenga zvese, uye handina manias. Uye zvakare, iyo genre ingori nzira yekuhodha masherufu muzvitoro zvemabhuku, mazhinji enganonyorwa ari, sezvavanotaura, anotenderera.
9. Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
Ndiri kuverenga gwara kune shiri dzinodya nyama kubva Antonio Manzanares chinobata mufananidzo, bhuku renhoroondo yemadzimambo eLeón de Ricardo Chao Prieto (Ndichangopedza Cipotudas Hupenyu naJorge Robles) uye kana ari emanoveli, izvozvi ndiri kuverenga Iye anogadzira wachi paPuerta del Sol yaEmilio Lara uye ini tiri kutarisira kutarisa kwekupedzisira kwe Antonio Perez Henares.
10. Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa ndechevanyori vakawanda sei varipo kana kuti vanoda kutsikisa?
Iyo yekushambadzira nzvimbo yakaoma neiyo shrinkage yemakore apfuura, kutengesa kwawa zvinotyisa uye chiitiko che piracy zvinoita kuti zvinhu zvese zviwedzere. Izvo zvinogadzira ratidziro, izere nemipendero uye magirazi, izvo zvakaoma kwazvo kutsanangura mumitsara mishoma.
Ichokwadi, dzimwe nguva ndinonzwa izvo vanhu vanoda kunyora asi vasingaverenge. Zvinosetsa, kazhinji ndinosangana nevanyori vekutanga-nguva vasinganyatso kuverenga uye nokutendeseka, ini handizvinzwisise.
Chero zvazvingaitika, sekutenda kwangu kuti izvo zvinotarisirwa kwandiri kupa kuraira kune vatsva, ini ndichataura izvozvo zvakakosha kutsungirira; Nhoroondo yacho ndeyekuti Bukowski akarongedza imba yekugezera nekurambwa kwemapepanhau Usaramwe.
Zvese nezvemunyori mu Francisco Narla.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Francisco Narla. Mibvunzo gumi yemunyori weLain the bastard.
"Alice muWonderland." Asina kunzwisiswa Lewis Carroll classic.